PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - Imambazo izobusisa abakuleli
Imambazo izobusisa abakuleli
Ilanga langeSonto - 2018-10-07 - Izindaba - LUCKY CAIN
KUYASUKA ngomzungezo wesikhungo seqembu lodumo emhlabeni, iladysmith Black Mambazo, lapho lizohambela izindawo ezahlukene lifundisa futhi luthuthukisa umculo wesicathamiya.
Lo mzungezo kulindeleke ukuba uqale ngomhla ka-12 kwephezulu eluthuli High School, ngaphansi kukamasipala wasemzumbe. Kulo mzungezo imambazo esihlabane ngenqwaba yezindondo eningizimu Afrika naphesheya kwezilwandle izobe ihambisana nenkakha kwezomculo usteve Kekana, yena ozocobelela abaculi abasafufusa ngezomthetho kulo mkhakha.
Phakathi kwezindawo leli qembu elizozihambela kubalwa iharding, ethekwini, umsinga nezinye. Leli qembu kulindeleke ukuba lihambele nakwazinye izifundazwe okubalwa kuzo i-eastern Cape, impumalanga nasegauteng. Iladysmith ngokusemthethweni umcimbi wokuklomelisa abasemkhakheni wesicathamiya obizwa ngokuthi icothoza Awards kwisilo samabandla uzwelithini.
Uxolani Majozi oyi- manager yaleli qembu uthi kubalulekile ukuba bacele izibusiso kwimbube baphinde basihloniphe ngendondo yokuqala yalo mcimbi.
“Umcimbi wokuhlangana nesilo uzokwandulela esizowenza obizwa ngeworld Music Festival ozoba seNanda Dam lapho sizobe sibophele izihlabani zakuleli nakwamanye amazwe,” kusho umajozi.
Phakathi kwabaculi ababoshelwe kulo mcimbi ozoba ngomhla ka-9 kuzibandlela (December) nonyaka kubalwa yona imambazo, Salif Keita, Lira, Oliver Mtukudzi, Thee Legacy, Qadasi nomaqhinga, Mbuso Khoza, Mondli nomerlon, The Soil, Steve Kekana nalabo abazoqokwa emizungezweni yaleli qembu yokufundisa ngomculo wesicathamiya.
Umzungezo wemambazo uzophothulwa ngomcimbi wecothoza Awards ozoba ngomhla ka-30 kuNdasa (March) ngonyaka ozayo.
KUYASUKA ngomzungezo wesikhungo seladysmith Black Mambazo wokufundisa ngesicathamiya.